Ezigbo Isi Iyi China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ezigbo Isi Iyi - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 21 Ngwaahịa maka Ezigbo Isi Iyi)
plastik na-ebubata ọkụ ọkụ Mgbe osisi, akwụkwọ nri, ma ọ bụ mkpuru osisi pulite, ha na-amị mkpụrụ ma ọ bụ akwụkwọ ọhụrụ, ihe ọkụkụ na-ebubata ihe ọkụkụ na-eme ka mkpụmkpụ ahụ pulite na oge oyi. Nkọwapụta Ngwaahịa Isi ihe: PVC size: 100 * 178mm, ahaziri dị elekere: 4w, ahaziri aha voltage: 120v, ahaziri dị Max...
Osisi Na-ekpo ọkụ Maka Mkpụrụ Mkpụrụ
Osisi Na-ekpo ọkụ Maka Mkpụrụ Mkpụrụ Germinates osisi ngwa ngwa PVC a na-arụ ọrụ ike. Mmiri àmà na inogide! Na-amụba mkpụrụ osisi ma na-ebelata ihe ịga nke ọma Mmiri na-enye aka ma na-akụ ihe ọmụma edere na tebụl Na-adabere n'okpuru ahịhịa ọka. Ụlọ mmiri na-arụ Mgbasa ọkụ ọkụ na-akpaghị aka bụ 10-20 Celsius F...
Germinator mkpụrụ osisi na-adị ọkụ
Germinator na-ebu ọkụ Nkọwapụta ngwaahịa Mkpuru osisi maka mma germination. Ọtụtụ mkpụrụ na-ahọrọ ala ọkụ maka mkpụrụ germination kacha mma. Mmiri ndị a dị mkpa, ndị na-adịghị mmiri na-eme ka mkpụrụ osisi germination na ebe ndị na-ekpo ọkụ dịkwuo nso. 20 ° F / 11 Celsius C n'elu ihere. Ejikwala ngwaahịa anyị iji...
Ugbo ahihia anyi na akpu na UL akwukwo, i nwere ike na-ekpo ọkụ maka ite osisi gi, mgbe ahu osisi gi ga eto nke oma n'oge oyi ma obu oyi. Lee na-eso anyị osisi ite okpomọkụ mpempe akwụkwọ na oyi nkọwa: Nkọwapụta ngwaahịa Ihe mgbochi anyị na - ekpo ọkụ na - enye mkpụrụ osisi ahụ maka ịmị mkpụrụ na ngwa ngwa...
Ezigbo ụlọ ndị a na-ahụ maka ihe nkiri na-ekpo ọkụ
Nkọwapụta Voltage ọsọ ọsọ: AC220V Nguzogide mbụ: 512-566Ω, nkwụsi ike 538Ω Ike: 90W ± 5% akwa mgbaaka na-eguzogide: 3750V5mA 5s Mgbochi nhichapụ: ≥100MΩ500Vdc Mmetụta nke iwepu ike: ≥5Kgf / 1min (Newton) Mwube na-eme: 1. Size: T0.75 * 300 * 400mm ± 1.5m 2. Ga-enwe mmetụta PTC, mgbe ike electrify ga-adị obere, ikike...
Ezigbo Isi Iyi Ezi igwe ejiji Okpokoro Ugbo Osisi Ezi Oko Ogo Ogo Ngwongwo Nursing Hydroponic Nri Ugbo Ogwu Carbon Heating Film Mgbochi ikpo ekpuchi